प्रतिपक्षमा बसेर सकरात्मक भूमिका खेल्छौँ – महामन्त्री डा. शंशाक कोइराला
गैँडाकोट, २९ पौष । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा नवलपुर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. शंशाक कोइरालाले विगतमा नवलपुर क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति कम भएको स्वीकार गर्दै अब समय समयमा जनताका माझ आइरहने बताउनुभयो । निर्वाचन जितेपछि नवलपुरका विभिन्न क्षेत्रमा विजय उत्सवमा व्यस्त कोइरालाले आज गैँडाकोटका विभिन्न क्षेत्रमा पुग्नुभएको थियो । विभिन्न चोकमा मतदातालाई धन्यवाद दिदै कोइरालाले नेपाली काँग्रेस समृद्ध राष्ट्रको पक्षमा रहेको र काँग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर सकरात्मक भूमिका खेल्ने कोइरालाले बताउनुभयो । कोइरालाले सरकारमा रहेका पक्षलाई सचेत गराउने र राम्रो काम गरे धन्यवाद पनि दिने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
यस्तै नवलपुर १(१) का प्रदेशसभा सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले समृद्ध नवलपुरका लागि जनताले गरेको मतदान खेर जान नदिने भन्दै आम मतदाताई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेस अझै पनि शीर्ष स्थानमा रहेको नेपालीले बताउनुभयो । सिटमा तलमाथि भएपनि विचार र सिद्धान्तमा नेपाली काँग्रेस नम्बर वान पार्टी भएको बताउनुभयो । देशभर काँग्रेसका शुभेच्छुक बढीरहेको समानुपातिक मतगणनाले पुष्टि गरेको नेपालीको भनाइ रहेको छ ।